आजका २ कार्टुन हेर्नुस्, दरमा पनि कर ! - Everest Dainik - News from Nepal
आजका २ कार्टुन हेर्नुस्, दरमा पनि कर !
काठमाडौं, भदौ ९ । आज पनि राजधानीबाट प्रकाशित हुने विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाले कार्टुन छापेका छन् । आज कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टबाट वात्स्यायन र बासु क्षितिजले बनाएका कार्टुन लिएका छौं । हेर्नुस्-
याे पनि पढ्नुस ढाकछोप युगको सुरुवात ! [कार्टुन]
ट्याग्स: Cartoon, Dar Khane